बाबुको मजाक गर्दा सोनाक्षीले कपिललाई हानिन् एक थप्पड, त्यस पछि कपिलले…. – Kavrepati
Home / समाचार / बाबुको मजाक गर्दा सोनाक्षीले कपिललाई हानिन् एक थप्पड, त्यस पछि कपिलले….
बाबुको मजाक गर्दा सोनाक्षीले कपिललाई हानिन् एक थप्पड, त्यस पछि कपिलले….
admin October 1, 2021	समाचार Leaveacomment 546 Views
कपिल शर्माले सोनाक्षी सिन्हासँग इन्स्टाग्राममा आफ्नो भिडियो सेयर गरेका छन्। जसलाई फ्यानहरुले धेरै रुचाएका छन्।जब कपिल शर्मा र बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा एक साथमा भेट हुन्छन तब उनीहरु बिचमा एक पुरानो गहिरो मित्रता रहेको जस्तो देख्न सकिन्छ । यी दुईको मित्रतालाई मानिसहरु पनि एकदमै मन पराउँछन् । य
सै बिचमा एक भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । जसमा अभिनेत्री सोनाक्षी र कपिल रहेका छन् । जसमा दुवै जना रमाइलो गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ । भिडियो कपोल र सोनाक्षीको हर्केत देखेर फ्यान हरुको हासो रोकिएको छैन ।
कपिल शर्माले उनको शोको एक भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियोमा सोनाक्षी उनको गीत ‘मिल माहिया’ मा डान्स गरिरहेकी छिन् ।
त्यसै समयमा त्यहाँ कपिल शर्मा आउँछन् । भन्छन् ‘यति कोहि तिमि सँग भेट्न आउँछ भने तिम्रो बाबुले त्यसलाई चुपचाप राख्छन्। त्यसपछि सोनाक्षी कपिल शर्मालाई रिसाएको जस्तै गरेर हेर्छन् र कपिल शर्मालाई एक मुक्का हान्छिन् । कपिल शर्माले भिडियो सेयर गर्दै लेख्छन् । भिडियो शेयर गर्दै कपिलले लेखे, ‘मेरो पहिलो रील।’
Previous कोरिया पुगेर तीनवटा तारे होट चलाउँदै मन्त्रालय हाँक्न सफल भइन् यी नेपाली
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असोज १६ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल